Askari dilay odey waayeel ah oo lagu xukumay dil toogasho ah | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Askari dilay odey waayeel ah oo lagu xukumay dil toogasho ah
Askari dilay odey waayeel ah oo lagu xukumay dil toogasho ah
Askari ka tirsan ciidamada booliiska ayaa maanta maxkamadda milatariga ay ku xukuntay dil toogasho ah. Askarigan ayaa lagu magacaabaa Nuur Daahir Geeddi, waana 29 sano jir. Marxuumka u dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cuamr Xasan Macalin.
Dacwad oogista ayaa askariga kusoo oogtay eed ah inuu si kas ah u toogtay nin oday ah oo waddada dhinaceeda ku gacansanayey isla markaana ibinayey siggaar 16-kii Juun ee aynu soo dhaafnay.
Dilka ayaa dacay kadib muran ka dhashay lacag jeexan oo ninka booliiska ah uu isku dayey inuu sigaar kaga iibsado marxuumka oo ka mid ahaa ganacsaada jidadka wax ku iibiya.
Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur (Shuute) oo xukunka riday ayaa sheegay in Dable Boolis Nuur Daahir Geeddi oo ka tirsan Saldhigga Booliska degmada Shingaani oo 16-kii bishii hore ee June ku dilay isgoyska Ceelgaabta oday goob yar oo ganacsi kulaha isgoyska, waxaana uu sheegay in askarigaas Maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah.
Maxkamadda milatariga ayaa sheegtay in xukunkaas racfaan laga qaadan karo.
Dhacdadii bishii hore ka dhacday Isgoyska Ceelgaabta ayaa dad badan naxdin iyo uur-kutaalo ka muujiyeen in oday goob yar oo ganacsi lahaa in loo dilay labo kun shiling soomaali, waxaana dadweyne ku sugnaa goobta ay si geesinimo leh ugu xoomeen askariga dilka geystay, kadibna ay gacan geliyeen ciidamo wadada marayay oo mas’uuliyiin la socday, kuwaasoo iyana suura geliyay inay Saldhigga Booliska Xamar Jajab geeyaan.